Apple wuxuu bilaabay macruufka 14.5.1 xalinta dhibaatada la socota Transparency App | Wararka IPhone
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 14.5.1 xalinta dhibaatada la socota Transparency App
Angel Gonzalez | 03/05/2021 19:49 | macruufka 14, Noticias
Toddobaad ka hor Apple waxay soo bandhigtay dhammaan noocyadeeda cusub ee alaabooyinka cusub, oo ay ku jiraan AirTag ama iMac cusub oo dib loo habeeyay. Nooca ayaa sidoo kale si rasmi ah loo bilaabay iyo dhammaan isticmaaleyaasha iOS 14.5, kaas oo ku jiray beta muddo dhowr bilood ah. War weyn ayaa la yimid nuucaan, sida suurtagalnimada furitaanka iPhone-ka ee Apple Watch ama imaatinka nidaamka hufnaanta App Tracking. Toddobaad ka dib, macruufka 14.5.1 ayaa lagu sii daayay si lama filaan ah, mid ka wanaagsan oo la xiriirta nidaamka cusub ee asturnaanta ee Big Apple ee dadka isticmaala badan siiyay dhibaatooyin.
macruufka 14.5.1 waxaa lagu sii daayay si lama filaan ah iyada oo lagu hagaajinayo hufnaanta App Tracking Transparency
Cusboonaysiintaani waxay hagaajineysaa arin laxiriirta Hufnaanta App Tracking halkaasoo isticmaaleyaasha qaar ee horay u curyaamiyay ikhtiyaarka laga yaabo inaysan ka helin ogeysiisyada barnaamijyada markay dib u awoodsiiyaan. Cusboonaysiintaan sidoo kale waxay bixisaa cusbooneysiin amni oo muhiim ah waxaana lagula talinayaa dhammaan isticmaaleyaasha.
Maaddaama aan tirineynay tan iyo bilowgii maqaalka, Apple wuxuu go'aansaday inuu soo saaro macruufka 14.5.1 ee macruufka 14 qalab socon iyo sidoo kale macruufka 12.5.3 qalabkaas oo aan rakibi karin noocyada cusub. Labadaba wadaag hagaajinta amniga nidaamka iyo waxqabadka qalabka.
Muxuu imaanshaha macruufka 14.5 macnaheedu u noqon doonaa isticmaalaha
Intaa waxaa dheer, macruufka 14.5.1 wuxuu soo bandhigayaa xalka cilad la xiriirta nidaamka hufnaanta App Tracking, oo ah nidaam cusub oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu maamulo barnaamijyadooda u oggolaanaya adeegsadayaasha iyo xogtooda in lala socdo. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaal badan ayaa awoodi kari waayey inay nidaamiyaan nidaamka markii ay naafoobeen markii ugu horeysay. Tan waxaa lagu hagaajiyay macruufka 14.5.1.
Nooca hadda waa la heli karaa waxaana lagu cusbooneysiin karaa aaladda lafteeda iyadoo la adeegsanayo cusbooneysiinta Wi-Fi o iyada oo loo marayo iTunes. Apple waxay kugula talineysaa rakibida cusbooneysiinta dhammaan isticmaaleyaasha dhammaan aaladooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple wuxuu sii daayaa macruufka 14.5.1 xalinta dhibaatada la socota Transparency App
Apple Watch waxay awoodi doontaa inay cabirto sonkorta dhiiga iyo aalkolada iyo cadaadiska dhiigga
12,9-inch iPad Pros waxay dheereeyaan shixnadaha Juun 17-30